एउटी महिलाको पछि पुरै ट्राफिक चौकी, चुरोटले पोलिदिने, चिट काट्ने, हावा फुस्काउने यो कस्तो हर्कत ! - Machhapuchhre FM
नेपाल बन्द भनेका छैनौँ – नेकपा, काठमाडौंमा सामान्य रुपमा गाडी सञ्चालनमा
एउटी महिलाको पछि पुरै ट्राफिक चौकी, चुरोटले पोलिदिने, चिट काट्ने, हावा फुस्काउने यो कस्तो हर्कत !
Published by Machhapuchhre FM at 2017-11-24
बस पार्क ट्राफिक
काठमाण्डौ । मंगलवार गोङ्गबु बसपार्कको प्रहरी चौकीका ईन्चार्ज ईस्पेक्टर हरीहर सुनवार ५० हजार घुस लिर्दै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगको टोलीले रंगेहात पक्राउ ग¥यो । आज फेरी त्यही प्रहरी चौकी नजिक रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको बिषय । नागरीकको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको सिंगो कार्यालयनै जब एक व्यक्तीको उठिवास बनाउँछु भन्दै लागि पर्छ तव त्यो व्यक्तीले के गर्ने ? काठमाडौ चक्रपथमा दैनिक कुद्ने दुग्देश्वस यातायातको बा ३ ख ८९६ नम्बरकी बस धनि सुस्मीता लामिछाने ग्वाङगबु स्थीत नयाँ बसपार्क भित्र रहेको ट्राफिक प्रहरी प्रभाग नै आफ्नो उठीवास लगाँउछु भन्दै लागी परेपछि हाम्रो कार्यालयमा आइन ।
बालाजु बस्ने उनि रातीको समयमा आफ्नै घर अघाडी गाडी पार्कीङ गर्छीन । रिङरोडभन्दा बाहिर खाली छोडीएको भागमा उनले गाडी राख्छीन् । तर हरेक दिन विहान ५÷६ बजे नै प्रभागबाट खटीएका ट्राफिक प्रहरी सो स्थानमा पुग्छन् र कहिले गाडीको हावा फुस्काईदिन्छन् त कहिले केहि न केही दोष देखाएर कागज पत्र सहित चिट काटेर हिँड्छन् । कति सम्म घर भित्र रहेको मोटरसाइकलको समेत बाहिर तानेर चिट काट्छन् । केही सोध्न खोज्यो भने जेल हाल्दीन भन्दै तर्साउँछन् ।
यि ट्राफिक प्रहरी….. सडकमा हिडिरहेको बेला बस रोक्न लगाउँछन्, थर्काउँछन्, कतिसम्म कि एक दिन त सवारीचालकलाई चुरोटले नै पोलिदिए ।
यसपछि हामी उनलाई लगेर ट्राफिक प्रहरी प्रभागमै पुग्यौँ । हामीले गोप्य रुपमा उनिहरुको छलफल कैद गरीरहँदा सुस्मीता लामिछानेलाई बालाजु चोकबाट उठीवासै लगाउने भन्दै थर्काइरहेका थिए यि ट्राफिक हबल्दारले ।
यति मात्रै हैन सधै हामीलाई मात्र किन यस्तो गर्नुुहन्छ भन्ने सुस्मीता लामिछानेको जवाफमा बढि बोले महिनाको ६० हजारसम्मको चिट काट्दीन्छु भन्दै तर्साए । यो हेर्नुहोस ।
एक सेवाग्राहीलाई ट्राफिक प्रहरीका यि दुइ जवाफ फेरी सुन्नुहोस ।
र सवारीचालकलाई चुरोटले पोल्दीएको पनि हेर्नुहोस ।
यो हेर्दा लाग्छ बसपार्क स्थीत शहिको नेतृत्वमा रहेको ट्राफिक प्रहरी प्रभागनै उनको उठीबास बनाउन लागेको छ । यो बालाजु क्षेत्र, रिङरोडको मुख्य कालोपत्रेमै सयाँै सवारी अलपत्र छन् । निजि त सर्वाजनि सबै गाडी महिनौ पार्कीङ गरीएका छन् तर उनिहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले देख्दैन ।
Na Payera – Kamal Khatri | New Nepali Pop Song 2017/2074
Published by Machhapuchhre FM at 2017-11-23
Sidha kura janata sanga episode 149
एउटी महिलाको पछि पुरै ट्राफिक चौकी, चुरोटले पोलिदिने, चिट काट्ने, हावा फुस्काउने यो कस्तो हर्कत – SIDHA KURA JANATA SANGA!! EPISODE 149
Toll Free Number: 16600112424
Skype id:- sidhakurajantasanga24@gmail.com
email id: sidhakura@news24nepal.tv